Ụlọ ọrụ akpụkpọ anụ PVC, ndị na -ebunye ya - ndị na -emepụta akpụkpọ anụ China PVC
Nnukwu ego China PVC Akpụkpọ anụ wuru maka ụgbọ ala na -adịgide adịgide
PVC, dị mkpụmkpụ nke Polyvinylchlorid, nwere ọtụtụ akwa n'okpuru mkpuchi ya. Ihe mejupụtara ya bụ polyvinyl chloride, a na -etinyekwa ihe ndị ọzọ iji kwalite nguzogide ọkụ ya, ike ya, ductility ya. PVC nwekwara ike dị elu na nkwụsi ike dị mma, na anaghị enwu ọkụ, nwere ike iguzogide mgbanwe ihu igwe wetara corrosion na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ezigbo ihe, n'ihi nchekwa ya dị elu, yabụ enwere ike ịhụ ya ebe niile na ndụ. Na ndụ kwa ụbọchị, enwere ike ịhụ ụdị ngwaahịa akpụkpọ anụ dị iche iche ebe niile, dị ka ịchọ mma n'ime, akwa sofa, ime ụgbọ ala, uwe, akpụkpọ ụkwụ na akpa na ihe ndị ọzọ. A na -eji akpụkpọ anụ eme ngwaahịa akpụkpọ anụ ndị yiri onwe ha
0.25mm-3mm Akpụkpọ anụ PVC na-eku ume maka mgbanwe ụgbọ ala
Ọnụahịa asọmpi PVC akpụkpọ anụ anaghị eri anụ PVC akpụkpọ anụ asọmpi asọmpi
E jiri ya tụnyere akpụkpọ anụ ndị ọzọ, akpụkpọ anụ PVC na -adị mfe plastik ma ka mma nhicha, na -ejikarị akwa nhicha mmiri ma ọ bụ akwa nhicha mmiri. Ọtụtụ akpụkpọ anụ PVC nke Bensen mere dị, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa ma ọ bụ nlele.
Mpempe akwụkwọ akpụkpọ anụ PVC nke nwere ike iku ume
Ihe mmetụta PVC adị nro dị nro maka ụgbọ ala ụlọ na mpịakọta
Onye na -emepụta China Fake Akpụkpọ anụ PVC maka ime ụlọ
Ọkpụrụkpụ 0.7mm PVC Faux Akpụkpọ anụ maka ihe mkpuchi oche oche ụgbọ ala
Akpụkpọ anụ artificial PVC dị elu maka ịchọ mma n'ime ụgbọ ala
Akụkụ ụgbọ ala na -ekpuchi ihe mkpuchi akpụkpọ anụ PVC na ọnụ ahịa asọmpi
54/55 Akpụkpọ anụ PVC sịntetik obosara maka oche oche ụgbọ ala
Faux Sịntetik PVC akpaaka akpaaka maka mkpuchi oche ụgbọ ala
Adress: Room 912, Floor 9th, Building Lujin, 14 Shangwu waihuan Rd, CBD Convention Center, Zhengzhou Mpaghara (zhengdong xinqu), Henan Plot mpaghara azụmaahịa efu.